काठमाडौं । पित्तथैलीमा भएकाे पत्थरीको अपरेशन गर्ने क्रममा काठमाडौं स्थित ओम अस्पतालमा बिरामीको आन्द्रा छेडिएर मृत्यु भएको छ । पित्तथैलीमा समस्या देखिएपछि ओम अस्पताल भर्ना भएकी सिन्धुपाल्चोक इन्द्रवा...
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका र मोरङको सुन्दर हरैचाका क्षेत्रमा ५ जना डेंगुका बिरामी भेटिएका छन् । डेंगुका बिरामी भेटिएपछि उच्च सर्तकता अनाउन चिकित्सकहरुले आग्रह गरेका छन । इटहरीमा दुई जना र सुन्दर हर...
बझाङ । बझाङका सुत्केरी महिलाहरुले ११ महिनादेखी राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सुत्केरी प्रोत्साहन वाफतको भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले साउन महिनादेखि सुत्केरि महिलाले भत्ता नपाएको गुनासो गरेक...
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका ५ स्थित विन्जेलमा फैलिएको झाडापखलाका कारण एकै गाउँमा ५० जना भन्दा बढी बिरामी भएका छन् । केहीको स्थिति गम्भीर रहेको छ । बिरामी हुनेमा भुजेलहरुको बस्ती रहे...
भारतबाट आउने प्रदूषित कणका कारण नेपालमा वायु प्रदूषणमा वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । भारतको उत्तरप्रदेश र विहार राज्यमा हजारौंका संख्यामा रहेका इँटाभट्टी र पन्जाब तथा राजस्थानमा अन्नबाली भित्र्या...
विराटनगर । जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र हाम्रो अस्पताल प्रा.लि. र विराटनगरबीच स्वास्थ्य उपचार सेवामा छुट सम्बन्धि संझौता सम्पन्न भएको छ । संझौता पत्रमा हाम्रो अस्पतालका सञ्चालक डा. शंंकर प्रसाद अधिकारी ...
आठ महिनामा पाँच लाख बिरामी भर्ना
काठमाडौं । आठ महिनामा पाँच लाख बिरामी भर्ना पछिल्लो आठ महिनामा झन्डै पाँच लाख बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । २०७५ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा आकस्मिक र बहिरंग सेवा लिएकामध्ये ४ लाख ८३ हजार ६०८ बिर...
काठमाडौं । एक महिनादेखि चलिरहेको सगरमाथा सरसफाई अभियानकाे क्रममा ११ टन फोहोर संकलन गरिएको छ । सगरमाथा सरसफाई अन्तरगत सगरमाथा आरोहणका क्रममा पुरिएका चार जनाको शव पनि निकालिएको छ । १२ जनाको सरसफाई टोली...
काठमाडौं । २०७२ साल वैशाखको भूकम्पबाट क्षति पुगेका थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुति गृहको मुख्य भवन र वीर अस्पतालको एउटा भवनको पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अस्पताल प्रशासनहरुका अनुसार एक मह...
काठमाडौं । नेपालमा बर्डफ्लुबाट एकजनाको मृत्यु भएपछि उनको नजिक गएका एक सय ७२ जनाको नमुना संकलन गरी सरकारले परीक्षणका लागि जापान पठाएको छ । सोमबार जापानको 'डब्लुएचओ कोलाबोरेटिङ सेन्टर फर इन्फ्ल...
काठमाडौं । शुक्रराज सरुवारोग अस्पतालमा रेबिजको उपचारको क्रममा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ । कुकुरले टोकेको त हो नि, घाउ ठीक भइसक्यो, छिमेकीको कुकुरले टोकेको त हो नि भनेर बस्दा रेबिजले धेरैलाई ...
काठमाडौं । सिंगापुरमा मंकीपक्स भाइरस देखा परेपछि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलद्वारा सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । नेपालमा पर्यटन वर्ष मनाउनै लाग्दा नेपाल सिंगापुर हवाइ सिधा भएकाले सतर्क रहन त्रिभुवन...
काठमाडौं । आँखारोग विशेषज्ञहरूले समयमा ध्यान नदिँदा आँखाको क्यान्सर (रेटिनोब्लास्टो) हुन सक्ने भएकाले त्यसमा सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । चिकित्सकहरूका अनुसार रेटिनोब्लास्टामा ५ वर्षमुनिका बालब...
एजेन्सी । अमेरिकी प्रान्त अलाबामाको सिनेटले गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको छ । रिपब्लिकन समर्थकहरुले अघि बढाएको उक्त विधेयक पास भएसँगै अलाबामा प्रान्तमा गर्भपतन माथि पूर्णतया प्रतिबन्ध ...
काठमाडौँ । काठमाडौँको टेकूस्थित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले त्यहाँ भर्ना भएका बिरामीमा हैजाको कीटाणु देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्...